Septambra 7, 2009 amin'ny 2:34 am
Hitako kely Bug tamin'ny Plugin Wordtube.
Rehefa avy actication ny transposh ny Playlist avy Wordtube gettin ny fahadisoana. Dont maneho sarimihetsika intsony.
Be fotsiny realy Plugin !!!
Septambra 7, 2009 amin'ny 2:45 am
Koa ny dia manakana ny NGG Diashow. Tsy mampiseho sary intsony…..
Septambra 9, 2009 amin'ny 11:13 aho
Aho rehefa mahazo banga pejy miezaka ny hanandrana ny plugin ny fandikan-teny. Niezaka aho ny farany fametrahana dikan-ny plugin amin'ny WP 2.8.4 amin'ny foto-kevitra ny Foliotastic sy ny 'andro sy ny Name’ permalink rafitra. Any hevitra momba ny fomba hamahana ity olana ity?
Septambra 10, 2009 amin'ny 6:06 am
Hi, toa tena mampanantena. Te-hahafantatra ny mpandika teny, raha ny plugin manohana Lighttpd?
Septambra 10, 2009 amin'ny 10:50 am
Tsy mahita na inona na inona antony dia tsy miasa amin'ny WordPress eo lighttpd, raha misy olana, aoka fotsiny ahy
M. Jans milaza
Septambra 11, 2009 amin'ny 2:21 am
Hi… izany dia tena n1 Plugin Fa Izaho kosa manana 1-3 Fanontaniana… and i hope you can tell me whats the answer 😉 ?
1. Ve ianao misy Caching System?
2. Fa inona no 2 Status Bara? Orange / maitso
3. Ny Plugin dia soo tsara antony dont mivarotra izany? Na afaka mividy azy io aho hamafa ny Backlinks?
Hainao ny mamaly ahy amin'ny alalan'ny Mail na eto toy ny lahatsoratra…
Septambra 13, 2009 amin'ny 8:22 aho
1. Eny, APC cache no ampiasaina izay misy
2. Seho voalohany mandeha ho azy ny fandrosoan'ny fandikan-teny, ny faharoa kosa dia mampiseho ny fandrosoan'ny famonjena vokatry ny lohamilina
3. Misaotra ny fiderana, Mbola manana lalana, dia afaka manala ny Backlinks raha mbola manaja ny plugin fahazoan-dàlana (ary manao ny loharanom-baovao azo farany) Tsy hihaza anareo raha hanaisotra izany raha tsy nisy ilay, fa tsy toy izany na, ny tany fotsiny mba hanampy ny fampielezana ny plugin izay kosa manampy azy hanatsarana.
Misalasala mba hifandray ahy
Septambra 13, 2009 amin'ny 9:59 am
Hi…. ny ahy indray…. im mangataka ny hanesorana ny rohy eo amin'ny tranlation anaty filatron-dahatsoratra, ary hanampy azy ho an'ny Tongopejy… dia izay ho maninona ho anareo? rehefa raha nanao izany … dia handefa anareo ny Url ho-maso….
Septambra 13, 2009 amin'ny 6:13 aho
Misaotra noho izany plug-in. Algorithms ho an'ny fandikan-teny foana rindrambaiko nihatsara.
Eny, ny ho tsara plug-in ary manana ara-barotra sasany viability. Afaka manolotra maimaim-poana mihitsy aza dikan-dia mivarotra ny Premium fanontana. Na ianao raha liana amin'ny fandikan-teny fotsiny dia nametraka fotsiny ny iray “manome ny tetikasa” na “hividy aho coffe” PayPal bokotra ka ny mpividy dia afaka Soso-kevitra anao.
Septambra 17, 2009 amin'ny 11:28 am
Izany no mahatahotra.. Araka ny nolazaiko tamin'ny fanehoan-kevitra farany!
Manontany tena fotsiny aho na dia mety ho azo atao ny tsy mety alalana mba hanova fiteny sasany any amin'ny ankapobeny.
Ohatra ny mpanjifa ny toerana te hita ao amin'ny fiteny be mpampiasa tany Eoropa sy Sinoa.
Na izany aza izy, ny tenany ihany no tiany misy ny fandikana ny teny anglisy fa dia faly ho an'ny hafa ny olona mba handika ny teny.
Farany, raha ny teny no nanimba dia misy fomba iray hiverina any amin'ny Default Google fandikan-teny?
PS Efa nanandrana fifidianana 5 kintana eo amin'ny WordPress plug amin'ny lahatahiry saingy misy toa errror ho amin'izao fotoana izao! 🙁
Septambra 22, 2009 amin'ny 1:18 aho
Hi nivory, i get an error when i am activating this plugin. voalaza: “Parse error: Misy diso ny raikipohy, tsy nampoizina T_STRING, miandry T_OLD_FUNCTION na T_FUNCTION na T_VAR na '}’ in /mnt/web2/41/43/5969543/htdocs/ebenbild/ebenbild/wp-content/plugins/transposh-translation-filter-for-wordpress/core/parser.php on line 26″
jonas solo milaza
Oktobra 21, 2009 amin'ny 1:21 am